GravityView ဖြင့် WordPress အတွက်အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ Martech Zone
GravityView ဖြင့် WordPress အတွက်အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2020 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
မင်းဟာငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာခဏတဖြုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် ပုံစံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းအတွက်ဆွဲငင်အားပုံစံများ WordPress ၌တည်၏။ ၎င်းသည်တောက်ပသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကပေါင်းစည်း ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ နှင့် HubSpot ဖောက်သည်တစ် ဦး အဘို့အကလှလှပပအလုပ်လုပ်တယ်။
ငါ Gravity Forms ကိုပိုနှစ်သက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုက data တွေကိုဒေသအလိုက်တကယ်သိမ်းဆည်းထားလို့ပါ။ များအတွက်ပေါင်းစည်းမှုအားလုံး ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ ထို့နောက်ဒေတာများကို third-party စနစ်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ Third-party API API ပြိုလဲလျှင်သို့မဟုတ်အခြား validation ပြissueနာရှိပါက data ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုကျွန်ုပ်မလိုလားပါ။ စျေးကွက်ရှိရိုးရှင်းသောအဆက်အသွယ်ပုံစံအများစုသည်ထိုသို့မပြုလုပ်ကြပါ။
ထို့အပြင် ReCaptcha နှင့် Google Maps ကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်သေတ္တာထဲ၌အလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ခိုင်မာသောစနစ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်အကန့်အသတ်မရှိသောကွန်ရက်စာမျက်နှာလိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးသင်စိတ်ကူးနိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Gravity Forms သည်အချက်အလက်များကိုချွေတာရန်အတွက်တောက်ပသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်၏ site ပေါ်တွင်ထိုအချက်အလက်များကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြလိုပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ငါလုပ်ခဲ့သောဖောက်သည်များအတွက်အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်အချို့ကိုငါတီထွင်လိုက်တယ်၊ ဒါကမလွယ်ဘူး။ ငါသည်လည်းဒါဟာစီမံခန့်ခွဲဖို့ပြည်တွင်းရေးဒေတာကိုပြသတဲ့ workflow ထုတ်ကုန်တီထွင်ခဲ့သည်။
ကောင်းပါပြီ ဆွဲငင်အားမြင်ကွင်း! GravityView သည်သင်၏ Gravity Forms အချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် WordPress plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည် - ၎င်းသည်ဆွဲငင်အားပုံစံ၏ကောင်းချီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းအဖြစ်ရရှိခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ရိုးရိုးလေးပဲ! သတင်းအချက်အလက်ကိုဖမ်းယူရန်ပုံစံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါ၊ ထို့နောက်တစ်ခုတည်းသောလိုင်းကိုမရေးဘဲဒေတာကိုပြသသည့်မြေပုံများနှင့်လမ်းညွှန်စာရင်းများပြုစုပါ။
GravityView သည်အကန့်အသတ်မရှိသောအမြင်များကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုတိုက်ရိုက်မထွက်ခွာမှီအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းအပိုင်းများကိုရှေ့ဆုံးမှတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ WordPress, Gravity Forms နှင့် Gravity View တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ သင်အလိုရှိသော်လည်းဒေတာများကိုစုဆောင်းဖော်ပြနိုင်သည့်အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုသင့်တွင်ရှိသည်။
ဒေတာများကိုစာရင်းများ၊ စားပွဲများ၊ ဒေတာဇယားများသို့မဟုတ်မြေပုံများတွင်ပင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပုံစံတစ်ခုဖန်တီးပါ - ပထမ ဦး စွာပုံစံနှင့်ဖန်တီးပါ ဆွဲငင်အားပုံစံများ, WordPress အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံများပလပ်ဂင်။ ပုံစံထဲသို့ဖြည့်စွက်ပြီးသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ထည့်ပါ။
ဒေတာစုဆောင်းပါ - ပုံစံကိုဖြည့်ပါ။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည် နောက်ကျောအဆုံး သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ Gravity Forms ပလပ်ဂင်အတွင်း၌ရှိသည်။
သင်၏ layout ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ - drag-and-drop interface ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ပြီးပြည့်စုံသော layout ကိုဖန်တီးပါ။ မည်သည့်နယ်ပယ်များထည့်သွင်းရန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ပြသမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ coding မလိုအပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ရှေ့ဆုံးတွင်ဖော်ပြပါ။ WordPress menu ကိုသွားစရာမလိုပဲ entries တွေကိုကြည့်ရှုပြင်ဆင်နိုင်တယ်။
GravityView ကို download လုပ်ပါ
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါအဘို့အကြှနျုပျ၏တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြုသည် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ နှင့် ဆွဲငင်အားမြင်ကွင်း ဤဆောင်းပါးတွင်ပါ။
Tags: Affiliateဒေတာစုဆောင်းဒေတာဇယားမြေပုံ googleဆွဲငင်အားဆွဲငင်အားhubspot ဖြစ်သည်အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်wordpress မြေပုံများ
WordPress နှင့်ဆွဲငင်အားပုံစံများကို အသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းပါ